Mumbai မြို့က Lockdown အပြီး ပြန်ဖွင့်တဲ့ အထည်ဆိုင်တခု
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်းက ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိလိမ့်မယ်လို့ အိန္ဒိယ အစိုးရက သောကြာနေ့က ပြော ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ V ပုံသဏ္ဍာန် စီးပွားရေး ဇောက်ထိုး ကျဆင်းတာကနေ တရှိန်ထိုး ပြန်လည်တိုးတက်မယ့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးက ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်း မရှိတာကြောင့် မူဝါဒ ချမှတ်ရေးမှာ ထူးခြားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး အမြောက်အမြား ထိုးပေးနေတာကလည်း စီးပွားရေးကို ပြန်လည် နာလံထူလာပါစေလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှာ ဖြစ်ပါ တယ်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အကြံပေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲ DR K.V. SUBRAMANIAN က ပြောပါတယ်။
တနင်္လာနေ့က အိန္ဒိယ အစိုးရက ထုတ်ပြန်တဲ့ စီးပွားရေး နှစ်လည် စစ်တမ်းမှာ ပါရှိတဲ့ ခန့်မှန်းချက်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF က ခန့်မှန်းထားတဲ့ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း ၁၁ ဒဿမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လည်း ကိုက်ညီနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကတော့ အိန္ဒိယ စီးပွားရေး အနုတ် ၇ ဒဿမ ၇ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့တာပါ။
လူဦးရေ ၁ ဒဿမ ၃ ဘီလီယံရှိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၁၀ သန်းခွဲ ရှိပြီး ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယ အများဆုံး ကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ ကူးစက်မှုနှုန်း သိသိသာသာကျဆင်းလာနေပါတယ်။ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးမှုကလည်း စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို အားဖြည့်ပေးလိမ့်မယ်လို့လည်း တာဝန်ရှိသူတွေက ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ စိုက်ပျိုးရေး ဥပဒေအသစ်တွေကို အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်နေတဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှုနဲ့ မငြိမ်မသက် ဖြစ်မှုတွေကို အိန္ဒိယ အစိုးရ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
လာမယျ့ဘဏ်ဍာနှဈအတှကျ အိန်ဒိယစီးပှားတိုးတကျမှုနှုနျး ၁၁% ရှိမညျ
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ်ဍာရေးနှဈ အတှငျး အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေး တိုးတကျမှုနှုနျးက ၁၁ ရာခိုငျနှုနျး ရှိလိမျ့မယျလို့ အိန်ဒိယ အစိုးရက သောကွာနကေ့ ပွော ပါတယျ။
အင်ျဂလိပျအက်ခရာ V ပုံသဏ်ဍာနျ စီးပှားရေး ဇောကျထိုး ကဆြငျးတာကနေ တရှိနျထိုး ပွနျလညျတိုးတကျမယျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေးက ကိုဗဈ ဒုတိယလှိုငျး မရှိတာကွောငျ့ မူဝါဒ ခမြှတျရေးမှာ ထူးခွားတဲ့ ဖွဈရပျတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ကာကှယျဆေး အမွောကျအမွား ထိုးပေးနတောကလညျး စီးပှားရေးကို ပွနျလညျ နာလံထူလာပါစလေိမျ့မယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးမှာ ဖွဈပါ တယျလို့ အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေး အကွံပေးအဖှဲ့ အကွီးအကဲ DR K.V. SUBRAMANIAN က ပွောပါတယျ။
တနင်ျလာနကေ့ အိန်ဒိယ အစိုးရက ထုတျပွနျတဲ့ စီးပှားရေး နှဈလညျ စဈတမျးမှာ ပါရှိတဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြက အပွညျပွညျဆိုငျရာ ငှကွေေး ရနျပုံငှအေဖှဲ့ IMF က ခနျ့မှနျးထားတဲ့ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ်ဍာရေးနှဈ စီးပှားရေး တိုးတကျမှုနှုနျး ၁၁ ဒဿမ ၅ ရာခိုငျနှုနျးနဲ့လညျး ကိုကျညီနပေါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈကတော့ အိန်ဒိယ စီးပှားရေး အနုတျ ၇ ဒဿမ ၇ ရာခိုငျနှုနျး ကဆြငျးခဲ့တာပါ။
လူဦးရေ ၁ ဒဿမ ၃ ဘီလီယံရှိတဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရသူ ၁၀ သနျးခှဲ ရှိပွီး ကမ်ဘာမှာ ဒုတိယ အမြားဆုံး ကူးစကျခံရတဲ့နိုငျငံ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရကျပိုငျးအတှငျးမှာတော့ ကူးစကျမှုနှုနျး သိသိသာသာကဆြငျးလာနပေါတယျ။ကာကှယျဆေး ထိုးနှံပေးမှုကလညျး စီးပှားရေး တိုးတကျမှုကို အားဖွညျ့ပေးလိမျ့မယျလို့လညျး တာဝနျရှိသူတှကေ ခနျ့မှနျးနကွေပါတယျ။
လောလောဆယျမှာတော့ စိုကျပြိုးရေး ဥပဒအေသဈတှကေို အပွငျးအထနျ ဆနျ့ကငျြ ကနျ့ကှကျနတေဲ့ လယျသမားတှရေဲ့ ဆန်ဒပွမှုနဲ့ မငွိမျမသကျ ဖွဈမှုတှကေို အိန်ဒိယ အစိုးရ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။